Sharea Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Sharea Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Aprily 18, 2022 Janoary 22, 2022 by Reyan Ahmad
Salama daholo, te hahafantatra ny momba ny faritra misy anao ary te-hitady asa? Raha eny, dia eto isika miaraka amin'ny rindranasa Android, izay fantatra amin'ny hoe Sharea. Manolotra ny vaovao sy ny vaovao rehetra momba ny faritra samihafa izy io. Manome antsipiriany momba ny asa sy ny anton-javatra hafa koa izy io.
Ny olona amin'izao andro izao dia tia mifandray sy mikaroka faritra samihafa. Noho ny toe-javatra misy ny areti-mifindra dia manana olana amin'ny fifandraisana sy fahazoana fampahalalana tonga lafatra momba ny toerana ny olona. Anisan'ny olana lehibe indrindra amin'izao andro izao koa ny fitadiavana asa.
Very asa ny olona noho ny aretina. Ny olona samy hafa, izay lavitra ny tranony dia tsy mahazo vaovao momba azy ireo. Noho izany, eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona, amin'ny alalàn'ny mpampiasa hahazo ny fampahalalana rehetra momba ny toerana samihafa.
Afaka mahita asa ihany koa ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Misy endri-javatra maro hafa ao amin'ity fampiharana ity, izay azonao atao ny mahita. Izahay dia hizara izany rehetra izany aminareo rehetra. Noho izany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia mila mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary mankafy azy io.
Topimaso momba ny Sharea App
Izy io dia sehatra fizarana fampahalalana momba ny fiarahamonina Android, ahafahan'ny olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina sy faritra samihafa afaka miara-miasa sy mizara vaovao. Novokarin'ny ABS-CBN. Ny antony lehibe mampivelatra ity fampiharana ity dia ny fampahafantarana ny olona momba ny faritra sy ny toerana misy azy ireo.
Manolotra ny rafitra GPS izy io, ahafahanao mametraka ny toerana. Raha te-hahazo vaovao momba ny faritra rehetra, ny mpampiasa dia tokony hametraka ny toerana. Hanoro ny toerana sasany azy ho azy io, izay azon'ny mpampiasa atao koa ny misafidy. Raha vantany vao vita io dingana io, dia ho hita amin'ny sokajy samihafa ny fampahalalana rehetra.
Ny fiteny ofisialin'ity fampiharana ity dia Filipino ary ity fampiharana ity dia natao manokana ho an'i Filipina. Noho izany, raha tsy avy any ianao, dia tsy ampiasaina ho anao ny kinova ankehitriny. Saingy ny fanavaozana ny ho avy dia mety ahitana mpizara firenena hafa.
Ao amin'ity rindranasa ity dia misy sokajy samihafa misy. Ny iray voalohany dia ao an-trano, izay manolotra ny fampahalalana rehetra. Manolotra zana-kazo iray, izay anasokajiana ireo data rehetra ho marina kokoa ho an'ireo mpampiasa. Manolotra famandrihana ho an'ny Alisto, izay midika hoe Fanairana. Manolotra ny vaovao fampandrenesana rehetra momba ilay toerana voafantina izy io.
Manampy izany koa ny fizarana Fahasalamana, izay manolotra ny olana sy ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny fahasalamana. Ho an'ny olona tsy an'asa rehetra dia manolotra sehatra asa izy io, izay ampiana ireo asa rehetra vao haingana sy fepetra takiana amin'ny asa. Afaka mahita mora foana ny atiny rehetra amin'ity app ity ny olona.
Ny mpampiasa dia afaka mandefa olana samihafa na fitakiana asa amin'ny alàlan'ity fampiharana ity ihany koa. Mila mamorona kaonty fotsiny ianao amin'ny fanomezana nomeraon-telefaona. Izy io koa dia manolotra sehatra fifampiresahana manokana, ahafahanao manavaka ny fifandraisana amin'ireo mpampiasa hafa amin'ity fampiharana ity.
Ho fampahalalana momba ny serivisy fitaterana dia manome sokajy koa izy io, amin'ny alalanao no ahitanao ny fahalalana momba ny serivisy fitaterana rehetra misy any amin'ny faritra. Misy endri-javatra maro kokoa an-taonina ao amin'ity rindrambaiko ity, azonao zahana. Noho izany, sintomy ity fampiharana ity ary alao ny fampahalalana rehetra momba ny toerana tianao.
Anaran'ny fonosana com.abscbn.kapp
SOKAJY Apps/News & Magazines
Ny sasany amin'ireo fiasa dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa. Noho izany, hizara lisitra tsotra misy fiasa lehibe ho anao rehetra izahay, izay azonao jerena eto ambany. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Manome ny Vaovao farany
Miresaka amin'ny olona hafa
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy io ary azonao sintonina avy amin'ity pejy ity ihany koa. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny. Misy bokotra fisintomana roa azo alaina amin'ity pejy ity. Ny voalohany dia eo an-tampony ary ny iray dia eo amin'ny farany ambany amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Sharea Apk no fampiharana Android tsara indrindra hahazoana ny vaovao rehetra momba ny zavatra samihafa. Manome fidirana mora amin'ny mpampiasa ny fiarahamonina ankehitriny hizara ny vaovao misy momba azy io. Noho izany, sintomy ity fampiharana ity ary manomboka mizaha. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, News & Magazines Tags Sharea Apk, Sharea App Post Fikarohana
Roadrunner App Download ho an'ny Android [2022 Update]
Fampidinana fampiharana Gabay Guro ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]